EMUI 10 hadda waa laga heli karaa adduunka taxanaha Huawei P30 | Androidsis
Dhowr maalmood ka hor waxaan ku dhawaaqnay in EMUI 10, oo ah nooca ugu dambeeya ee Huawei lakabka u-habeynta moobiilka, uu imanayo Taxanaha P30. Waqtigaas waxaan u bixinay warka mid wanaagsan, laakiin waxa xun ee ku saabsan waa in ay ahayd beta-ka lakabka la sheegay ee dhabtii la bixin jiray, oo aan adduunka oo dhan ahayn.
Hadda waa Roland Quandt, caan-bixiyaha caanka ah, ee intaas noo sheegaya EMUI 10 OTA qaabkeeda xasilloon ayaa loogu soo bandhigayaa adduunka oo dhan taxanaha 'Huawei P30'.
Cusbooneysiinta softiweerka ee EMUI ku dareysa Huawei P30 waxay leedahay miisaan dhan 4.47 GB. Cusboonaysiinta waxaa lagu hirgelinayaa qaybo badan, sidaa darteed haddii aadan helin ogeysiiska cusbooneysiinta OTA, waa inaad sugto, laakiin waxyar, maxaa yeelay waa arrin saacado ama maalmo ah ka hor intaadan ugu dambeyntii ku haysanin qalabkaaga oo diyaar u ah inaad soo dejiso oo rakib.
EMUI 10 cusbooneysiin ayaa hadda loo heli karaa taxanaha P30 ee adduunka sidoo kale.#EMUI10 # HuaweiP30series
- Teme (特米) (@ RODENT950) November 14, 2019
Waxaa xusid mudan in isbeddelka isbedelku liis gareynayo qaar ka mid ah dhibaatooyinka is-waafajinta ee qaar ka mid ah codsiyada bangiyada, laakiin taasi khaladka kuma lahan shirkadda Huawei, laakiin waa kuwa sameeya barnaamijyada.
Huawei P30 Pro, wax ka badan kamaradda wadne istaagga [Dib u eegis]
EMUI 10 waxay keeneysaa tanno shaqooyin iyo astaamo cusub ah, iyo sidoo kale naqshad cusbooneysiin ah oo siinaysa isdhexgalka hawo habeysan oo habsami leh. Tani waxay sidoo kale u oggolaaneysaa aaladaha iswaafajinaya in lagu xiro kombuyuutarkaaga Huawei oo leh hal taabasho oo keliya, waxay keeneysaa qorshe midab cusub oo uu dhiirrigeliyay nidaamka midabka Modidi Modidi wuxuuna ku darayaa Xaaladda Madoow, taas oo indhaha u fudud isla markaana bixisa waayo-aragnimo akhris iyo raaxo badan gaar ahaan xaaladaha iftiinka hooseeya. Waxyaabaha kale, waxay sidoo kale qaadataa waxa loo yaqaan 'Deterministic Latency Engine', oo awood u leh in lagu wanaajiyo qoondaynta agabyada nidaamka heer jajab si waxqabad dhakhso leh loo helo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » EMUI 10 hadda waa laga heli karaa adduunka taxanaha Huawei P30